Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadaha Bilaashka Ah Adigoon Dhammeystirin Soo -jeedimaha 2021 -ka
Bogga ugu weyn Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadaha Bilaashka Ah Adigoon Dhammeystirin Soo -jeedimaha 2021 -ka
Qof kastaa wuu jecel yahay kaararka hadiyadda, gaar ahaan marka ay lacag la’aan tahay. Tani waa sababta oo ka baxsan maalmaha dhalashada iyo ciidaha, kaararka hadiyadda ee bilaashka ah caadi ahaan kuma dhacaan dhabtaada.
Inta badan, waxaan ku dhammaannaa dhammaystirka dalabyo kala duwan ama buuxinta sahannada qaar ka hor intaanan helin kaararka hadiyadaha.
Hagaag, waa inaad la kulantay pop -up -kan…
“Waxaad tahay booqdaha 2 milyan ee! Guji halkan si aad u hesho kaarkaaga hadiyadda ee bilaashka ah! ”
Ama, "Waxaad ku guuleysatay $ 200 kaarka hadiyadda Visa."
Inta badan ma sahlana sida ay u muuqato! Si kastaba ha ahaatee, weli waa suurtogal in lagu helo kaararkan hadiyadeed lacag la’aan onlayn, adigoon adigu culays saarin.
Akhriskan, waxaan ku tusi doonaa sida loo helo iyaga oo aan dhammaystirin dalabyada ama sahannada oo aan dhib lahayn. Habkaas, waxaad badbaadin kartaa lacag iyo waqti oo wali waad heli kartaa kaararkaaga hadiyadaha ku dhawaad ​​dadaal la'aan.
Hoos waxaa ah toban (10) siyaabood oo lagu helo kaararka hadiyadda ee bilaashka ah iyada oo aan la dhammaystirin dalabyada:
Kaararka Amaahda Abaalmarinta
Ku Wareeji Daawadaada Farmashiye Cusub
#1 Xisbiyada Twitter
Kani waa kan ugu dhow lacag bilaash ah oo dhab ah oo aad ka heli karto internetka! Waa hal dariiqo oo lagu helo kaararka hadiyadda ee bilaashka ah iyada oo aan la dhammaystirin dalabyada ama sahannada.
Xafladaha Twitter-ka waa madadaalo onlayn ah oo ku kulma barta twitter-ka halkaas oo summadaha iyo saameeyayaashu ku xirmaan si ay dadka kale u ogaadaan wax badan oo ku saabsan badeecadaha ama adeegyada cusub oo ay bixiyaan abaalmarino madadaalo ah.
Inta badan xisbiyada Twitterka, waxaa jira ugu yaraan hal ama laba kaar oo hadiyad ah oo ay bixiyeen martigeliyeyaasha.
Inta lagu jiro xafladahaan, martigaliyayaashu waxay weydiin doonaan ka qaybgalayaasha su'aalo inta badan la xiriira sumadda ay la shaqeynayaan.
Markaa, haddii aad ka qaybgasho oo aad ka jawaabto su'aalaha, waxaad noqon kartaa mid ka mid ah kuwa nasiibka u helay
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad is tusto oo aad tweet -gareyso.
Waxaad ku biiri kartaa adiga oo adeegsanaya hashtag -ka xisbiga, adoo raacaya dadka ama shirkadaha ku lugta leh xisbiga Twitter, ama isticmaal jadwalka xisbiga Twitter.
Waxa xiisaha lihi, waxaad had iyo jeer Google ka samayn kartaa.
Kaliya booqo Google oo raadi "Xisbiyada Twitter -ka kaararka hadiyadda ee bilaashka ah".
Si kastaba ha ahaatee, ogow si aad ugu biirto xisbiga Twitter, tweet kasta waa inuu ku jiraa hashtag -ka xisbiga, haddii kale kuma soo muuqan doono quudinta xisbiga.
Sidoo kale, haddii aad rabto inaad dhegeysato, waa wax aad u fudud. Waxa kaliya oo ay tahay inaad gujiso hashtag xafladda.
MobileXpression waa shirkad cilmi baaris oo suuq ah oo ujeedadeedu tahay hagaajinta internetka. Si tan loo sameeyo, waxay kaaga baahan doonaan inaad si qarsoodi ah u bixiso xogtaada.
Markaa, beddelkeeda ku -rakibidda VPN -gaaga taleefankaaga gacanta, waxaad ku heli doontaa kaararka hadiyadda ee joogtada ah oo bilaash ah.
Marka, toddobaad kasta oo aad xubin ka ahaato guddiga, waxaad helaysaa hal dhibic.
Halkaan, waxaad ku heli kartaa £ 5 kaar hadiyad ah 10 dhibco iyo £ 10 kaarka hadiyadda oo ah 15 dhibcood. Tan micnaheedu waa 1 deyn oo qiimaheedu yahay £ 0.70 (iyadoo la isticmaalayo kaarka hadiyadda ee £ 10).
Taasi micnaheedu waa, haddii aad xubin sii ahaato waxaad kasban doontaa ku dhawaad ​​£ 3 bishii (adoo adeegsanaya £ 0.70 × 4 = £ 2.8).
#3 Kaararka Amaahda Abaalmarinta
Wakhtiyadii ugu dambeeyay, kaararka deynta ee kugu abaalmariya kaararka hadiyadda ee bilaashka ah suurtagal ma aha in la helo.
Haddii aad iska diiwaangeliso kaarka Abaalmarinta (ku dhawaad ​​qof walba ayaa bixiya maalmahan, xitaa Amazon) markaa, sida caadiga ah waxaad dib ugu heli kartaa lacag caddaan ah iibsi kasta oo aad samayso, oo aad inta badan ku iibsan karto lacag caddaan ah ama kaararka hadiyadda.
Tanina waa hab wanaagsan oo aad dib ugu soo ceshato xoogaa khasaare ah oo ka soo baxa kharashaadkaaga.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad maskaxda ku haysaa in kharash -garaynta ujeeddada helitaanka kaarka hadiyadda aysan u qalmin.
Halkan waxaa ah hal sabab oo weyn…
Waa inaad bixisaa bil kasta ama waxaad dulsaar ku bixin doontaa lacagta ku jirta kaarkaaga deynta. Ogsoonow in dulsaarkan uu ka badan yahay inta aad ka hesho dhibco ahaan sidaa darteed, waa inaad bil kasta iska bixisaa.
Marka, abaalmarinta kaararka deynta ayaa adiga kugu habboon oo keliya haddii aad si mas'uuliyad leh u adeegsan karto. Taas micnaheedu waa, waa inaadan dabagelin haddii aadan ku sugnayn meel deggan, dhaqaale ahaan.
Sababta oo ah dib u dhac ku yimaada bixinta kaarkaaga abaalmarinta waxay noqon doontaa khasaare aad uga weyn faa'iidooyinka hore.
Sida MobileXpression, Nielsen waa shirkad kale oo cilmi baaris suuqa ku siisa xogtaada. Tanna si qarsoodi ah ayaa loo sameeyaa.
Marka, usbuuc kasta waxaad haysataa barnaamijka, waxaad kasbataa dhibco lagu beddeli karo kaararka hadiyadda lacag la'aan.
Ugu badnaan ee aad kasban karto sanad walba waa $ 50, taas oo ah, waxaad heshaa qiyaastii $ 4 bishii.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale ka qaybgeli kartaa goos -goosyadooda billaha ah oo leh abaalmarino gaaraya $ 1,000.
Ka -qaybgalka deeq -bixiyayaashu waa fursad wanaagsan oo aad ku heli karto kaararka hadiyadda lacag -la’aan onlayn ah adiga oo aan dhammayn wax dalab ah ama sahan ah.
Gelitaanka tartan ku -meel -gaar ah micnaheedu maahan inaad ku guuleysan doonto sidaad ku guuleysato iyo haddii kaleba waxay ku xiran tahay nasiibkaaga.
Laakiin waa kan warka wanaagsan!
Haddii aad gasho deeq -bixinno kugu filan, ugu dambayntii waa inaad wax ku guulaysataa.
Hadda, sidee baad ku heli kartaa hadiyado?
Helitaanka hadiyadaha si dhab ah uma adka haddii aad taqaanid meel aad eegto.
Saameeyayaal badan iyo kuwa wax qora ayaa si joogto ah u maamula hadiyadaha iyagoo wata kaararka hadiyadda si ay u kordhiyaan raacitaankooda internetka.
Tani waa sababta oo ah inta badan kuwa wax ku qora iyo kuwa sumadda yaqaan waxay og yihiin in kaararka hadiyaduhu yihiin kuwa soo jiita dareenka dadka kale, taas oo ka dhigaysa inay aad ugu badan tahay in dadku rabaan inay galaan bixinta oo ay suuragal tahay inay akhriyaan qoraalladooda.
Asal ahaan, haddii aad rabto inaad kaqaybqaadato waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad raacdo qofka oo aad adigu ku jirto.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale booqan kartaa baloogyada aad jeceshahay si aad u aragto haddii ay hayaan wax -bixinno!
#6 Tartanka Tartanka
Sweepstakes waxay aad ugu eg yihiin hadiyadaha. Dhab ahaantii, labaduba waa nooc ka mid ah baloogyada xisbiyada twitter -ka.
Farqiga ugu weyni wuxuu yahay in sida caadiga ah, waa inaad lacag bixisaa si aad u gasho ka -qaybgal. Taasina had iyo jeer ma aha mid mudan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad kaadhadhkaaga hadiyadaha ka heli kartaa goos goosyada xorta ah ee lagu galo internetka.
Qaar ka mid ah barnaamijyada lacag -bixinta sida Rasiidka Hog iyo Swagbucks Bixiya isboortiga bilaashka ah.
Sida hadiyado -bixinta, sida ugu fudud ee lagu heli karo goos -goos -goos -goosashada waa in si fudud loo helo Google.
Aways maskaxda ku hay tan: waa inaadan waligaa lacag bixin si aad u gasho tartanka tartanka.
#7 Goobaha Cashback
Tani waxay si weyn ugu tahay dukaameystayaasha internetka. Ku adeegashada internetka oo leh goobo lacag caddaan ah ayaa ah hal dariiqo oo lagu helo kaararka hadiyadda ee bilaashka ah iyada oo aan la dhammaystirin dalabyada ama sahannada.
Haddii aad tahay dukaanle caadi ah oo internetka ah, ma doonaysid inaad dhaafto dhammaan abaal -marinnada aad u -qalmi karto marka aad wax ka iibsanayso goobo lacag -kaash ah.
Inta badan goobaha lacag -ka -soo -celinta ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad lacag caddaan ah ku bixisid kaarka hadiyadda halkii aad kaash ahaan ahaan lahayd.
Si aad u noqoto mid sax ah, xulashada kaarka hadiyadda ayaa inta badan ku siisa qiimo badan marka la barbar dhigo lacag caddaan ah.
#8 Raadi Shabakadda
Maalin kasta waxaan google ka raadinnaa waxyaabo kala duwan annaga oo aan lacag la siin.
Hadda, ka soo qaad kaarka hadiyadda ee bilaashka ah khadka tooska ah adigoo ka eegaya shabakadda adigoon dhammayn wax dalab ah.
Goobaha sida Qmee iyo Swagbucks dhab ahaantii waxay ku siinayaan lacag baadinta shabakadda.
Qmee si fiican buu u shaqeeyaa haddii aad ku sugan tahay USA. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa rakibidda kordhinta biraawsarka. Kadib, u raadi sida caadiga ah oo waliba guji xayeysiisyada mararka qaarkood ka soo muuqda natiijada raadintaada.
Dhanka kale, Swagbucks waa goob abaalmarin oo bixisa dhammaan noocyada adeegyada. Mid ka mid ah adeegyadan waa mashiinka raadinta oo kugu abaalmarinaya dhibcaha Swagbucks (SBs), lacagta Swagbucks. Waxaad ku soo furan kartaa ama ku beddeli kartaa kaarar hadiyadeed oo kala duwan ama lacag caddaan ah.
#9 Goobaha Sahanka
Hal dariiqo oo lagu helo kaadhadhka hadiyadaha bilaashka ah ee onlaynka ah iyada oo aan la dhammaystirin dalabyada ayaa ah in la buuxiyo sahannada mareegaha.
Goobaha sahanka badanaa waxay kugu abaalmariyaan kaarar hadiyad oo lacag la'aan ah buuxinta sahanada iyo bixinta fikradahaaga.
Waxaad kasbataa meel kasta laga bilaabo dhowr pence ilaa dhowr rodol sahan kasta. Si kastaba ha noqotee, kaararka hadiyadda ee aad heli karto waxay ku xirnaan doontaa degelka aad doorato.
#10 Ku Wareeji Farmashiyahaaga Farmasi Cusub
Ma ogtahay in u -wareejinta daawooyinkaaga farmashiye cusub ay ku siin karto kaarka hadiyadda ee bilaashka ah?
Maalmahan waxaa koon walba yaal dukaanno dawooyin.
Farmasiiyada badidoodna waxay kaa rabaan macmiilkooda, waxayna diyaar u yihiin inay kugu abaal -mariyaan inaad u beddesho dawooyinka aad u soo dhiibtay.
Si kastaba ha ahaatee, ogow in heshiisyadan aysan si joogto ah u socon, laakiin si joogto ah ayay u soo baxaan.
Farmasiiyada soo socda ayaa ku siin doona kaarka hadiyadda oo lacag la'aan ah si aad ugu wareejiso daawadaada:
CVS: $ 50
Kmart: $ 30
Aid Aid: $ 25
Safeway: $ 75
Walgreens: $ 25
Qof walba wuxuu jecel yahay qaadashada kaararka hadiyadda. In kasta oo dhammaystirka dalabyada ama sahannada si aad u kasbato kaararka hadiyadda inta lagu jiro waqtigaaga firaaqada ah runtii maahan fikrad xun, inteenna badan ayaa neceb buuxinta bogagga su'aalaha sahanka kaliya si aan u kasbado kaarka hadiyadda $ 5.
Waxa xiisaha lihi, adoo adeegsanaya qaar ka mid ah siyaabaha kore, waxaad kasban kartaa kaararka hadiyadda ee bilaashka ah adigoon dhammayn dalabyada.
Lacag Degdeg ah: Lacag Bixiya si aad u Daawato Fiidyowyada Online 2021 (TOP 15)
Iibinta Tradelines ee 2021: Samee $ 1500/hr Aad u Fudud & Degdeg
Sida Lacag Loogu Helo Si Aad U Daawato Filimada Halbeegga Ah - Ka Qaado $ 1,000 Filim
Lahaanshaha il dhaqaale waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha. Dadku waxay ku helaan mushahar ay qabtaan shaqooyinka qaarkood…
Faallooyinka Azlo vs Novo 2021: Bangiga Ganacsiga ee ugu Fiican 2021 | Talada Khabiirka
Azlo iyo Novo labaduba waa bangiyo dhijitaal ah oo aad u wanaagsan kuwaas oo ka caawinayay ganacsiyada yaryar iyo bilowga maareynta…
25 Goobood oo ugu Fiican oo Ku Shaqaaleysiiya Markaad 15 Sano Jirto ama Ka Yar | 2022 Liiska
Waxaad halkaan u joogtaa qoraalkan maxaa yeelay waxaad la yaaban tahay haddii ay jiraan meelo shaqaaleysiiya 15…